စွဲလမ်းပြန်လည်နာလန်ထူအကူအညီနဲ့ရယူခြင်း | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ Porn ဖြတ် အင်တာနက် ညစ်ညမ်း စွဲလမ်းမှု/ ပြဿနာရှိသော အသုံးပြုမှုတွင် ကူညီပါ။
အင်တာနက် ညစ်ညမ်း စွဲလမ်းခြင်း/ ပြဿနာသုံးခြင်း သည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပေါ်လာနိုင်သည်။ အင်တာနက် ညစ်ညမ်းများကို အဆက်မပြတ် ထိတွေ့နေခြင်းသည် ဦးနှောက်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများတွင် မီးခိုးရောင် အရာများကို လျော့ပါးသွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ထင်ရှားစေနိုင်သည်။
uncharacteristic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ fetishes
porn script များထွက်ပြုမူရန်အလိုဆန္ဒ
ဤအရာများသည် မနှစ်မြို့ဖွယ်၊ မလိုလားအပ်သော နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော သက်ရောက်မှုများပင်ဖြစ်ကြောင်း လူအများစုက သဘောတူကြပေမည်။ ဒါပေမယ့် မင်းကျိုးမသွားဘူး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ လမ်းစရှိပေမယ့် ဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့ လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အင်တာနက် ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှု/ ပြဿနာရှိသော အသုံးပြုမှုများအတွက် သင်သည် အကူအညီ လိုအပ်နိုင်သည်။
ဤတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှတိကျသောအခြို့သောကောင်းသောအွန်လိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးဖိုရမ်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်သြစတြေးလျအခြေစိုက်နေကြသည်။ ပထမသုံးအွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတစ်နေ့လျှင်သည်အခြားအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင် 24-နာရီထံမှအကူအညီကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ကဗြိတိန်အနေဖြင့်အင်္ဂါအများရှိရှိသည်။
reboot Nation အားပေးမှုနှင့်ပညာရေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ကလူ '' reboot '' ကူညီပေးသည်။ ပြန်ဖွင့်အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်း) မှပြည့်စုံကြွင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ reboot Nation အမေရိကန်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂါယူဆပါသည် (တွစ်တာ @GabeDeem) ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသူတွေကိုတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ကြသည်။ သင်သို့မဟုတ်ချစ်ရသူ porn စွဲနှင့် / သို့မဟုတ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူရုန်းကန်နေလျှင်, ဤအရပ်၌သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဒီ site တွင်သင်သည်ယနေ့ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သော tools များအားဖြင့်သင်တို့ကိုတပ်ဆင်ဖို့အများကြီးအရင်းအမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလားအလာအန္တရာယ်ပိုမိုသတိပြုမိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ reboot နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်း YouTube ကိုပြေး တီဗွီချန်နယ်.
NoFap အကြီးဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာ Self-အကူအညီနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ recover လုပ်ဖို့ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရသောစိန်ခေါ်မှုများအိမ်ရှင်အဖြစ်။ 90 ရက်ပေါင်းရွှေစံဖြစ်ပါတယ်။ NoFap ညစ်ညမ်း၌ရှိသမျှသောသားကောင်များထောက်ခံပါတယ်။ သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲသင်ကိုယ်တိုင်ရှိသည်သို့မဟုတ်ရုံဖက်, မိဘ, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူရုန်းကန်တစ်စုံတစ်ယောက်တဦးကိုချစ်၏, ထို NoFap အဖြစ်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ရှိမရှိ အသိုင်းအဝိုင်းသငျသညျကိုထောကျပံ့ဖို့ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reddit NoFap အဆိုပါ reddit / r / ဖိုရမ်အပေါ် NoFap နောက်ထပ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး repository ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရှေးရိုးစွဲနောက်ခံကနေလာမယ့်လူများအတွက်အကူအညီဖြင့်နှစ်ဦးကပရဟိတလုပ်ငန်းများမှာ သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အမေရိကန်နှင့် သစ်စာသမာဓိပွနျလညျဖွ သြစတြေးလျ၌တည်၏။
အလားတူပဲဒီသြစတြေးလျက်ဘ်ဆိုက် သည်ကြီးမြတ်သော Go ကောင်းသောအချက်အလက်များနှင့်ဗီဒီယိုများရှိပါတယ်။
လူထုအခြေပြု 12 ခြေလှမ်းနှင့် SMART ပြန်လည်နာလန်ထူ
လိင်စွဲအမည်မသိ (SAA) သည် ၁၂ ချက်ပါသောမူများအရလိင်အရစွဲလမ်းသူများအတွက်ရွယ်တူချင်းပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များကိုပေးသည်။ အစည်းအဝေးများသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဗြိတိန်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကျင်းပကြသည်။
လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲသူများအမည်မသိ (SLAA) ကို 12-Step အခြေခံမူအောက်ပါလိင်နှင့် / သို့မဟုတ်မေတ္တာစွဲနှင့်အတူလူများအတွက်ရွယ်တူထောက်ခံမှုအုပ်စုများပေးထားပါတယ်။ အစည်းအဝေးများအခမဲ့အပေါင်းတို့နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျင်းပကြသည်။
COSA အဘယ်သူ၏အသက်တာကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ 12-Step ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးများအခမဲ့အပေါင်းတို့နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျင်းပကြသည်။
SMART Recovery ကို - ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်း။ UK SMART Recovery ၏အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်လူမှုရေးကွန်ရက်တစ်ခု၊ လေ့ကျင့်ရေး site နှင့် chat system တို့ပါဝင်သည်။
CEOP ကလေးအသုံးချလှုံ့ဆော်မှုများကိုနှင့်အွန်လိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး command တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရဲကဖွင့်, တကဗြိတိန်-ကျယ်ပြန့် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ CEOP တစ်ခုခုသင်စိုးရိမ်နေသို့မဟုတ်မလုံခြုံဟုခံစားရစေတော်မူပြီကြောင့်အွန်လိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခါအထောက်အပံ့ပေးပါသည်။
အဆိုပါ အခုတော့ကိုရပ်တန့်! ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Lucy Faithfull ဖောင်ဒေးရှင်းမှကလေးများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုများခံစားနေရသောအမျိုးသားများ (အမျိုးသမီးများ) အတွက်လည်းကလေးသူငယ်ဆန့်ကျင်ရေးအလို့ငှာကူညီမှုပေးသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။
အဆိုပါ NSPCC လည်ပတ် Childline အရာကိစ္စများအမျိုးအစားအားလုံးကိုနှင့်အတူလူငယ်များ၏ကူညီပေးဖို့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းစလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ညစ်ညမ်းအပေါ်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်။
အချည်းစည်းအမှန်တရားစီမံကိန်း မန်ချက်စတာအခြေစိုက် ands ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရှုထောင့်ကနေအကူအညီကမ်းလှမ်းနေသည်။
* ညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန် Software များ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်စစ်ထုတ်ခြင်းများကကူညီနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းရှောင်ကွင်းနိုင်သည် ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအသုံး ၀ င်တဲ့အကူအညီတစ်ခုလို့မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူသုံးချင်တဲ့စွဲလမ်းသူကသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့်၎င်းတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏မပိတ်ဆို့ထားသောဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။
စိုစွတ်စေသော ဘက်စုံပံ့ပိုးမှုစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကောင်းမွန်သောအက်ပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပဋိညာဉ်တရားကိုမျက်လုံး ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, အင်တာနက်တာဝန်ခံနှင့် filtering ကိုကမ်းလှမ်း
က Norton မိသားစုကို Premiere
အကြောင်းအရာအတားအဆီးနှင့် Integro အားဖြင့်မိသားစုကာကွယ်ပေးသူ
* အဲဒီရုံရရှိနိုင်ပါသည်များစွာ software ကိုရှေးခယျြစရာတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုအိမ်ခန်းအဆိုပါဆုကြေး Foundation ကတစ်ဦးထောက်ခံချက်ဖွဲ့စည်းမထားဘူး။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့အညာဘက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ filter များနှင့်စောင့်ကြည့် app များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အချိန်ကိုယူပါ။
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ ဂယ်ရီ Wilson က, ဓနသဟာယထုတ်ဝေရေးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရရှိနိုင် အသံစာအုပ်အဖြစ်နှင့်ညှိအပေါ် e-စာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်,။ (အသံဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်တယ် အခမဲ့ သင်တစ်လအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးဘို့ Audible မှစာရင်းသွင်းလျှင်။ )
Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ နောဧသည်ခအီး, ဘုရားကျောင်းသည်။ PDF အဖြစ်အခမဲ့ရရှိနိုင်သငျသညျ sign up ကိုလျှင် ဒီမှာ။ နော Church ချာ့ချ်သည်ကိုယ်တိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲသူဖြစ်ခြင်းသည်အတွေ့အကြုံမှဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Porn Trap: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကြောင့်အောင်နိုင်သူပြဿနာများရန်မရှိမဖြစ်လမ်းညွှန် Wendy Maltz နှင့်လာရီ Maltz ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်စွဲ - အဖော်၏အမြင် Paula ခန်းမ, တစ်ဦးဦးဆောင်ဗြိတိန်ကုထုံးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်များ- ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအမျိုးသားများကဆရာဝန်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမကြာခဏသတိမထားမိကြဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူတို့သည် Viagra သို့မဟုတ် erectile ပြViနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ညွှန်ကြားသည်။ Viagra သည်လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းစေရန် 'ခါးပတ်အောက်၌' အလုပ်လုပ်သည်။ ပြTheနာက porn-induced erectile disfunction ဟာ ဦး နှောက်နဲ့လိင်အင်္ဂါအကြားအာရုံကြောအချက်ပြမှုပြpoorနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Viagra နှင့်အလားတူဆေးများသည်မကြာခဏအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ၊ အလျင်အမြန်အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲအမျိုးသားများကို ပို၍ ပင်စိုးရိမ်ပူပန်စေသည်။ ED မည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ဤအရာကိုကြည့်ပါ တင်ဆက်မှု။ ဤတွင် ၁၁ မိနစ်ကြာသောဗီဒီယိုဖြစ်သည် ဆီးရောဂါပါရဂူနှင့်အင်တာဗျူး.
သင်ဤသည်လယ်ပြင်၌ CPD လေ့ကျင့်ရေးချင်ပါတယ်သူတစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုတွေ့မြင် အလုပ်ရုံ။ သူတို့ကအထွေထွေ Practitioner ၏တော်ဝင်ကောလိပ်တို့ကအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
စကော့တလန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာများမှထှထှေကေုထံမှလွှဲပြောင်းကြိမ် 9-12 လအတွင်းန်းကျင်ရှိပါတယ်။ လိင်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများများသောအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကအလေ့အကျင့်တစ်ခုကုထုံးမှညစ်ညမ်းစွဲသံသယအမှုပေါင်းရည်ညွှန်းသည်။ သငျသညျအခမဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲမနိုင်လျှင်, အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သငျသညျကိစ္စများအခြေခံတစ်ခုသို့မဟုတ်ထဲကနေဖြတ်အတူထောက်ခံမှုလိုအပ်ခဲ့ကြပေမည် လေ့ကျင့်သင်ကြားလိင်ကုထုံး။ A ကောင်းဆုံးလိင်ကုထုံးညစ်ညမ်း-related မမှန်ခြင်းနှင့်လိင်စွဲနားလည်သင့်တယ်။ ဗြိတိန်အတွက်ထီးအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းကိုဆက်သွယ်ပါ:
ဆက်ဆံရေးစကော့တလန် (သာစုံတွဲများအတွက်) ။
လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive များ၏ကုသမှုများအတွက်အစည်းအရုံး.
ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲမှုသည်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတစ်ခုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရပါကသင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုအပ်လိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်ထားသောလိင်ကုသသူထံမှချက်ချင်းအကူအညီတောင်းခံပါ။ ရှေ့နေကောင်းတစ်ယောက်လည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။
သငျသညျစကော့တလန်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်အကြံပြု အခုတော့ကိုရပ်တန့်!။ Stop It Now သည်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ရန်သော့ချက်မှာမိဘများနှင့်ရပ်ရွာလူထုမှအသိအမြင်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Lucy Faithfull ဖောင်ဒေးရှင်းမှ သောဗြိတိန်နိုင်ငံတလွှားအလုပ်လုပ်သည်။
ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သားသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်စိုးရိမ်တုံ့ပြန်အတွက်အများပြည်သူယုံကြည်ကိုးစားရာဆောက်လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်။ သူတို့ကအစပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံအစည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီမှထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုကိုပေး။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်သောသူတို့အားလည်းပါဝင်သည်။ ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုပုံရိပ်ဒါမှမဟုတ်နဲ့တူ၏အပိုင်နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးသည်ကိုလည်းယခုရပ်တန့်။ ဒါဟာအင်တာနက်ပြစ်မှုများများအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာနေသောလူမျိုးတို့ပါဝင်သည်။ သူတို့ကအစမိတ်ဆွေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူသို့မဟုတ်သူကိုမှားပါပြီ၏အန္တရာယ်မှာနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီ၏မိသားစုဝင်များထောက်ခံပါတယ်။
<< Porn ပြProbleနာကိုအသိအမှတ်ပြုပါ Porn အခမဲ့ >> သွား